साफ यू–१५ महिला फूटबल : नेपाल सेमिफाइलमा – Durbin Nepal News
साउन २८, २०७५ ३:४७ मा प्रकाशित
काठमाडौँ, २८ / भुटानमा जारी दोस्रो यू–१५ साफ च्याम्पियनसीप महिला फूटबलअन्तर्गत आज आफ्नो दोस्रो खेलमा नेपाल बंगलादेशसँग ३–० गोलले पराजित भएको छ ।
बंगलादेशसँग पराजित भए पनि नेपालले सेमिफाइनलको यात्रा भने तय गरेको छ ।
भर्खरै थिम्पुमा सम्पन्न समूहचरणको अन्तिम खेलमा नेपाल पराजित भएको हो । बंगलादेशको जितमा पहिलो हाफको इन्जुरी समय (४६औँ मिनेट)मा तोहुरा खातुनले गोल गरिन् ।
त्यस्तै ५१औँ मिनेटमा मारिया मान्डा र ६७औँ मिनेटमा सजिदा खातुनले एक÷एक गोल गर्दै ३–० को अग्रता कायम गर्न सफल भए । त्यसपछि खेलमा गोल हुन सकेन र बंगलादेशले खेल ३–०ले जित्यो ।
हारका बाबजूद समूह बीको उपविजेता बन्दै नेपाल सेमिफाइलन प्रवेश गरेको छ भने दुवै खेल जितेको बंगलादेश समूह विजेता बन्दै सेमिफाइनल पुगेको छ ।
यसअघि शनिबार भएको पहिलो खेलमा नेपालले पाकिस्तानमाथि ४–० को फराकिलो जित हासिल गरेको थियो ।
त्यस्तै समूह ‘ए’ बाट भारत र भुटान सेमिफाइनलमा पुगेका छन् । सेमिफाइलनमा नेपालले आगामी सोमबार भारतको सामना गर्नेछ भने भूटानले बंगलादेशको सामना गर्नेछ ।
कलाकार भेट्रानको विजयी शुरुआत
कलाकार भेट्रानले खुला भेट्रान कप सिक्स ए साइड फूटबल प्रतियोगितामा आज विजयी शुरुआत गरेको छ ।
चाबहिल स्पोर्टस् क्लबद्वारा आयोजित प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा कलाकारले सजन स्मृतिलाई ५–० गोलले पराजित ग¥यो । विजयी टिमका लागि ‘म्यान अफ द म्याच’ मरिचमान श्रेष्ठ र हरि डाँगीले २–२ तथा डम्बर नेपालीले १ गोल गरे ।
एसियन इन्टरटेन्मेन्ट एण्ड जुना फिल्मस्को मुख्य प्रायोजनमा भएको प्रतियोगिताको अर्को खेलमा बनेपाले टुसाललाई ४–१ गोलले हरायो । बनेपाका विक्रम श्रेष्ठले दुई तथा प्रदीप धगौडा र अनिश श्रेष्ठले १–१ गोल गरे । विक्रम ‘म्यान अफ द म्याच’ चुनिए । टुसालका प्रज्ज्वल गुरुङले सान्त्वना गोल गरे । विजेता दुवै टोली क्वाटरफाइनलमा प्रवेश गरेका छन् ।
भदौ २ गतेसम्म हुने नकआउट प्रतियोगितामा १४ टिम सहभागी छन् । विजेताले रु एक लाख र उपविजेताले ५० हजार नगद पुरस्कार पाउने छन् ।
यसअघि प्रतियोगिताको प्रतिनिधिसभाका सांसद गगन थापाले उद्घाटन गर्नुभएको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रंगशाला निर्माणको तयारी
काठमाडौँ, २८ साउन (रासस) ः सरकारले सातै प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रंगशाला निर्माण यसै वर्षबाट गर्ने भएको छ ।
सरकारको पाँच महिने कार्यप्रगति विवरणमा प्रदेश नं. १ को इटहरी, प्रदेश नं. २ को जनकपुर, ३ को हेटौंडा, गण्डकी प्रदेशको पोखरा, ५ को दाङ, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत र प्रदेश नं. ७ को धनगढीमा आधुनिक सुविधा सम्पन्न रंगशाला निर्माण यसै वर्षबाट शुरु गर्ने उल्लेख छ । रंगशाला निर्माणको थालनी गर्न जग्गा पहिचान भइसकेको जनाएको छ ।
यस वर्ष जग्गाको पहिचान गर्ने र अर्को वर्षदेखि निर्माण शुरु गरिने कार्यप्रगतिमा उल्लेख छ । त्यसैगरी भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका–९ र १० तथा सोही स्थानसँग जोडिएको चाँगुनारायण नगरपालिकाको वडा नं ८ र ९ मा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रंगशाला निर्माण गरिनेछ । रासस